Na Plateau steeti e gbuola mmadụ 11 - BBC News Ìgbò
Na Plateau steeti e gbuola mmadụ 11
10 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo Nsogbu Fulani na-achị ehi na ndị ọrụ ugbo atala isi ọtụtụ ndị mmadụ na Naijiria
N'ụzụ ụtụtụ ụnyaahụ bụ Fraide 9 ọnwa Maachi, ndị a na-eche na ha bụ ndị Fulani na-achị ehi gburu opekata mpe mmadụ ise na Miango nke dị n'okpuru ọchịchị Bassa.
Ha gbukwara mmadụ isii n'ime obodo Ganda dị na Dafu nke dị n'okpuru ọchịchị Bokkos ndị dịcha na Plateau steeti.
Ha gbakwara ụlọ karịrị ụlọ irị ise ọkụ ma merụkwa ọtụtụ ndị mmadụ ahụ.
Nke a na-eme ka onyeisiala bụ Muhammadu Buhari sepụchara ụkwụ njem ọ gara na steeti ahụ ebe ọ gara mepe ngalaba steeti ahụ na-ahụ maka ikpa udo.
Ọnụ na-ekwuchitere otu ndị ntorobịa n'obodo ahụ bụ Lawrence Zongo, kwuru na mmadụ ise egburu ebe ahụ gụnyere: Illa Isa Peter bụ onye gbara afọ 52, Henry Audu afọ 25, Emmanuel Joseph dị afọ 16, Christopher Joseph, afọ 16 na Peace Joseph dị afọ isii. Atọ n'ime ndị a bụ ụmụnne nke abụọ bụ ejima.
Gọọmenti etiti ewetuola mbubata osikapa
Chioma Akpotha: Ime ihe nkiri bụ akara aka m
Onyeisi ndị Irigwe Development Association (IDA) bụ Sunday Abdu, gwara ndị ntaakụkọ na Jos, na iihe mere na mwakpo Miango bụ eziokwu.
Abdu sịrị: "Ọ bụ eziokwu na ndị Fulani na-achị ehị gburu mmadụ ise na Miango na mwakpo bidoro n'abali Tọọsde ruo chi ofifo ụnyaahụ(Fraide).
"Ndị ọzọ bụ ndị emerụrụ ahụ na mwakpọ ahụ e nweghị onye chọrọ ha okwu. E bugala ozu ndị ahụ n' ụlọọzụ dị n'ụlọọgwụ. Anyi anaghịzi akụ gbanụgbanụ ili ndị nke anyị egburu. Oge ọbụla anyị kwadoro ili ha, anyị ga-eme ka ndị mmadụ mara.
"Ndị na achị ehi na-egbusịsị anyị mana ọ bụ ha bụ ndị na-ebenụ. Kedụ ụdị agụgọ dị otu a? Anyị na-arịọ ndị ọrụ nchekwa ka ha tinyekwuo uchu n'ọrụ nche iji kwụsị mbibi na ịla ndụ n'iyi na-aga n'ihu."
Otu onye ndu ndị obodo na Bokkos bụ Matawa Mankut, kwetakwara na ihe mere n'obodo Ganda ụnyaahụ bụ eziokwu.
Mankut sị: "Anyị nọ n'ili ozu ugbua iji likọta ndị e gburu. Anyị na-arịọ steeti na gọọmenti etiti ka ha gbatara anyị ọsọ enyemaka iji chekwa ndụ anyị na ihe anyị nwere n'ihi na ndị a na-achọ ikpochapụ anyị."
Ọnụ na-ekwuru otu ndị agha nchekwa nke a kpọrọ 'Operation Safe Haven' bụ Majọ Adam Umar, kwuru na ihe e kwuru mere ma kwukwa na mgbe ndị mmadụ titara ha mkpu akwa na ha mere ngwa nwgwangwa zaa ha oku.
Umar kwuru na mgbe ha rutere na ndị mwakpo ahụ agbalagala.
Ọ gara n'ihu kwue na ndị agha ewerela ọnọdụ na mpaghara ahụ ma gwakwa ndị mmadụ ka wetara ha ozi ngaghari mmadụ maọbụ ihe na-edoghị anya.
Mwakpo ndị Boko Haram n'ọnụ ọgụgụ
12 Febrụwarị 2018
A ga-elikọta ndị nwụrụ na mwakpo Benue steeti
7 Maachị 2018
Nigeria vs Guinea: Ugo amaburula enyi Guinea tụọ n'ala
'A na-enyocha onye otu anyị e chere gburu nwaokoroọbịa n'Enugwu'
'Eji ụgbọelu helikọpta zọọ onye nwere ọrịa nkpọnwụ ahụ ndụ'